Hevitra MPANOHARIANA | Mey 2007
Voaroaka ny RP Sylvain Urfer, sj
2007-05-11 @ 17:18 in Finoana
Kay kay kay kay…vay vay vay vay an-kandrina sady maharary no mahamenatra. Fa loza inona ity ? ny fihavanana efa ratsiratsy eo amin’ny fiaraham-monina katolika sy ny fanjakana ity mbola nampiana fandroahana mompera indray sady izay indray momera Frantsay. Raha ny vahoaka kristiana amin’ny ankapobeny ary ny katolika indrindra indrindra dia farafaharatsiny efa nandre ny anarany avokoa.
Nalaza teo amin’ny fampianarana na ankapobeny ho an’ny tanora(Saint-Michel sy Saint-Antoine) na eo amin’ny sehatra ambony ihany koa ka mampianatra politika sy filozofia ary teolojia (Institut Catholique de Madagascar ?). Tsy zoviana ihany koa teo amin’ny fanoratana ka namoaka boky roa tena fantatry ny mpamaky azy « tantely amam-bahona » (Le doux et l’amer) sy L’espoir et la doute izay miresaka ny tontolo ao Anosibe Antananarivo indrindra indrindra ary voalaza koa moa tonian’ny famoaham-boky Justice et Paix izany hoe tena ao amin’ny angadiny tsara raha ny resaka famoaham-boky.
Eo anilan’izany dia mitondra ny Paroasy ao Anosibe ihany koa ny tenany. Faritra azo lazaina ho nanana ny hafanany tamin’ny fotoan’androny. Singa iray no hosinganiko dia ny nanoherany mavaivay ny olona nipetraka nanoloana ny arabe sy tao anaty tsena tamin’ny andro nanamboarana ny lalana sy ny tsenan’Anosibe. Tsy nekeny mihitsy ny fanalana tsotra ireo olona tao raha tsy mahazo antoka tsara fa ho tafaverina tamin’ny toerany avokoa ireo olona nipetraka sy nivarotra teo amin’ny toerana nisy azy tao Anosibe tao.
Na izany aza dia henjam-pitondrana teo amin’ny sahany ihany koa ny tenany. Tsy nekeny hijanona tao ampiangonana fa asainy miverina misolo akanjo ireo tovovavy indrindra indrindra ka somary fohy sy zipony na manara-tena loatra ny akanjony. Teneniny ampahibemaso hody mihitsy raha mbola midrikina hiditra ampiangonana ihany amin’ny fitafy tsy maotona. Indray aho (sa indroa moa ?) no nivavaka tao amin’io fiangonana io (f’angaha moa aho katolika indray ? Tsia Loterana aho ka fa ny fanasana amin’ny batemy sy ny karazany ve dia ho lavina ?) ka niezaka nihaino ny toriteniny. Ny azoko ambara dia tsy naheno tsara aho ka tsy haiko na ny fanamafisam-peo no somary ambany na izy no miteny mora na izaho no lalodalovana rahateo.
Ankoatra izay dia mpikambana mavitrika ao amin’ny Sehatra Fanarahamaso ny Fifidianana izy. Mety ho antony iray namelezana azy io satria izy irery no tsy mizaka zom-pirenena malagasy amin’ireo rehetra mpikambana ao. Toy ny heverin’ny ao amin’ny fitondrana ho mitsabaka ny raharaham-pirenen’ny tsy azy manko izy manambara tsy mihambatra ny heviny na dia mihevi-tena ho toy ny malagasy aza ny tenany. Izay lazainy rahateo tsy natao hampifalifaly ny mpitondra rahateo.
Tao ho ao moa aho somary teritery ny fotoako nefa miezaka hatrany aho ny nikaroka araka izay azo natao. Raha mitady ny antony avy amin’ny fanjakana moa dia tsy maintsy avy amin’ny haino aman-jery akaiky azy ihany no hihainoana azy. Tsy nandre mihitsy aho ny halina aloha afa-tsy ny tao amin’ny Matv. Rehefa tonga ny maraina dia ny vaovaontsika gazety teny malagasin’ny le quotidien no novakiako ka nahitako fa fanapahan-kevitra laharana 069/mininter/sg/die/selr no nanafoana (fa tsy hoe tsy nanampy intsony) ny fahazoan-dalana hipetraka maharitra eto Madagasikara. Voalaza ao ihany koa fa fanohintohinana ny filaminam-bahoaka no ahiana hotanterahiny rehefa narahi-maso izy.
Marihina moa ho an’izay mbola mety tsy hahalala fa tsy maintsy misy mpitsikilo avokoa ny ankamaroan’ny fiangonana indrindra ireo fiangonan-dehibe rehetra na aiza io na aiza rehefa eto Madagasikara. Ny karazam-piangonana rehetra ihany koa dia voara-maso avokoa na lehibe izy na madinika. Noho izany ny toriteny sy ny teny rehetra ao dia efa araky ny mpitondra fanjakana avokoa. Tsy afaka mitompo-teny aho saingy azo heverina fa misy teny mety ho maherihery nataony ampahibemaso matoa haingana dia haingana toy izao ny fanapahan-kevitra